यी सुन्दरीले आफूलाई गोली हान्नेलाई दिइन् ‘फ्लाइङ्ग किस’ ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार यी सुन्दरीले आफूलाई गोली हान्नेलाई दिइन् ‘फ्लाइङ्ग किस’ !
यी सुन्दरीले आफूलाई गोली हान्नेलाई दिइन् ‘फ्लाइङ्ग किस’ !
on: ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १२:४० In: विचित्र संसारTags: यी सुन्दरीले आफूलाई गोली हान्नेलाई दिइन् ‘फ्लाइङ्ग किस’ !No Comments
पेरिस । मार्गरेट गीर्तोइदा जेले अर्थात् माता हारीलाई आजभन्दा ठिक सय वर्ष अघि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनी जासूसीका लागि विश्वमै प्रख्यात सुन्दरी मानिन्थिन् ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार गोली हान्नका लागि तैनाथ सुरक्षाकर्मीका सामून्ने उनलाई उभ्याइयो । गोली हान्नु अघि उनलाई आँखा चिम्लिन भनिएको थियो तर उनले गोली हान्न तयार सैनिकलाई नै ‘फ्लाइङ्ग किस’ दिएकी थिइन् । -एजेन्सी
Tags: यी सुन्दरीले आफूलाई गोली हान्नेलाई दिइन् ‘फ्लाइङ्ग किस’ !